October 23, 2018 - PuraKhabar
प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो, के जालान त उनि ?
October 23, 2018 Purakhabar News
६ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणको निम्तो आएको छ । भारतका दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको सम्झनामा इण्डिया फाउन्डेसनले गर्न लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि निम्तो आएको हो । शुक्रबारदेखि सुरु हुने कार्यक्रम तीन दिनसम्म चल्नेछ । यो कार्यक्रममा भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायतको सहभागिता रहने इण्डिया फाउन्डेसनले जनाएको छ । तर, प्रचण्डको निजी सचिवालयले भने भारत जाने नजाने अझै अनिश्चित रहेको बताएको छ । नेकपाको बैठक परेकाले जाने सम्भावना कम रहेको एक सदस्यले बताए ।
घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार
काठमाडौँ, ६ कात्तिक : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल धनुषाका प्रहरी सहायक हवल्दार चन्देश्वर गिरीलाई रु ११ हजार घुस लिएको अभियोगमा आज पक्राउ गरेको छ । नेपाल भारत सीमा बजारबाट सामान ल्याउन सहज गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप गिरीमाथि लागेको छ । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालका अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ कदमचोकबाट उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
वि.सं. २०७५ कार्तिक ०७ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर २४ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:०९ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२५ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:०० बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१८ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:१५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२९ बजे, आश्विन शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथि, बेलुका १०:१५ बजेसम्म, त्यसपछि प्रतिपदा तिथि, रेवती नक्षत्र, बिहान १०:०७ बजेसम्म, त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र, चन्द्रमा मीन राशिमा, बिहान १०:०७ बजेसम्म, त्यसपछि मेष राशिमा, हर्षण योग,…
दशैंको अन्तिम दिन भोलि , कोजाग्रत पुर्णिमाको रातबाट यी ४ राशिको चम्किनेछ भाग्य !
October 23, 2018 October 23, 2018 Purakhabar News
कोजाग्रत पूर्णिमालाई शरद पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ । दशैंको अन्तिम दिन भोलि दसैँघरका सम्पूर्ण फूलप्रसाद जमराको अवशेष जलघाटमा बिसर्जन गर्ने गरिन्छ । । दसैं र नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमात्र समाप्त हुन्छ । वर्षको एक पटक यो दिन चन्द्रमाको सोह्र कलाले परिपूर्ण हुने बताइन्छ। विजयादशमीका दिन सुरु भएको टीका जमरा लगाउने क्रम पनि बुधबार सम्पन्न हुँदैछ। यस वर्षको शरद पूर्णिमाको रात देखि ४ राशीका व्यक्तिहरुलाई निकै शुभ फल मिल्ने योग बनेको छ । आज हामी तपाईहरुलाई यी ४ राशीको बारेमा बताउन जाँदै…
केशव स्थापित ‘सेक्सुअल प्रेडेटर’ रहेको एक जना महिला पत्रकारले गरिन खुलासा
काठमाडौं, ६ कात्तिक । एक जना महिला पत्रकारले प्रदेश ३ का मन्त्री तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख केशव स्थापितको यौन प्रस्ताव नमान्दा जागिर खुस्किएको खुलासा गरेकी छन् । भारतमा चलिरहेको ‘मि टु’ सामाजिक सञ्जाल अभियानकै शैलीमा पत्रकार महिला रश्मिला प्रजापतिले फेसबुकमार्फत यस्तो खुलासा गरेकी हुन् । उनले १५ बर्षअघिको घटना स्मरण गर्दै स्थापित मेयर हुँदाका घटना सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले स्थापितको चरित्र अझै पनि उस्तै रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले नेपालका राजनीतिज्ञ, व्यपारी, कलाकार, मिडिया मालिकबाट महिलामाथि यौन हिंसा भइरहेको खुलासा गरेकी छन् । केशव स्थापित ‘सेक्सुअल प्रेडेटर’…
नेपाली सेनाले अमेरिकासँग यस्ता घातक हतियार किन्ने : भारत र चीन झस्कियो !!
काठमाडौं । आज संसारमा कुनैं पनि देशका लागि उसको सुरक्षा चुनौंति सबैंभन्दा खत्तरा बनेको छ । भारतले पनि हालैं रुससँग अत्याधुनिक हात हतियार मिसाइल प्रणाली खरिद गरेको छ । पाकिस्तान चीन भारत नेपालका छिमेकी मुलुक आज अझ समृद्ध र शक्तिशाली बन्दैं गइरहेका छन । यो बिचमा नेपाली सेनाले करिब पाँच हजार थान अमेरिकी राइफल एम–१६ हतियार भित्र्याउने भएको छ । सेनाले यस वर्षका लागि झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी खजाना खरिद गर्न लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सेनाका लागि यस्तो राइफल खरिद गर्न लागेको सेनाले जनाएको…
रोमन रेइन्सलाई क्यान्सर, अहिलेलाई त्यागे उपाधि
एजेन्सी । डब्लुडब्लुईका स्टार रोमन रेइनका स्टार रोमन रेइन्सले ल्युकेमियाका कारण आफ्नो युनिभर्सल च्याम्पियन्सीपको उपाधि परित्याग गरेका छन् । चार पटकका विश्व च्याम्पियनले फ्यानहरुलाई सोमबार जानकारी दिँदै आफूलाई ११ वर्षअघि यो रोगको लक्षण देखा परेको तर त्यसपछि ठीक भएको बताएका हुन् । यद्यपि, अहिले फेरि उक्त रोग बल्झिएको कारण अब रिङ्गमा लड्न नसक्ने बताए । लगत्तै फ्यानहरुले समाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग ‘थ्याङ्क यु रोमन’ भन्दै उनलाई समर्थनको सन्देशहरु दिइरहेका छन् । यो ह्यासट्याग ट्वीटरमा ट्रेन्डिङ नै बनेको थियो । पूर्व अमेरिकन फुटबल खेलाडी पनि रहेका रेइन्सले ‘मन्डे नाइट रअ’ बाट सो…
दिनहुँ यौन सम्बन्ध राखे महिलाहरु यसरी छुट्टीन्छन्, देखिन्छन् यस्ता संकेत
दिनहुँ पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे महिलाहरु यसरी छुट्टीन्छन्, देखिन्छन् यस्ता संकेत एजेन्सी । एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा नै यहि हो, हेर्नुस यस्तो छ कारण धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा…
अमेरिकी पत्रकार खसोग्गीको शवका टुक्रा इस्तान्बुलस्थित साउदी राजदूतको बगैँचाबाट बरामद
अंकारा (टर्की) : अमेरिकी पत्रिका वासिङ्गटन पोस्टका पत्रकार जमाल खसोग्गीको शवका टुक्रा इस्तान्बुलस्थित साउदी राजदूतको घरको बगैँचाबाट बरामद भएको छ। उनको २ अक्टोबरमा इस्तान्बुलस्थित साउदी महावाणिज्य दूतावास कार्यालयमा हत्या भएको थियो । यो घटनाका क्रममा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तयैप एर्दोगनले साउदी सरकारले खसोग्गीको हत्याको षड्यन्त्र २८ सेप्टेम्बरमै बनाइएको खुलासा गरेका छन् । खसोग्गीको हत्यालार्इ राजनीतिक भनिएको छ । टर्कीका राष्ट्रपतिका अनुसार यस हत्यालार्इ पूर्णता दिनका लागि साउदी अरबबाट १५ जनाको टोली २ अक्टोबरमै इस्तान्बुल आएको थियो । एर्दोगनले यस मामिलालार्इ ‘राजनीतिक हत्या’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले टर्कीको सेक्युरिटी…
धरान । पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्ला स्थित धरान उपमहानगरपालिकामा दुई पक्षबीच भिषण झडप भएको छ । दशैंको बेलामा आयोजित मेलाको पक्ष र विपक्षका युवाहरुबीच कुरा नमिल्दा झडप भएको हो । मेलाको विपक्षमा रहेका युवाहरुले विरोध र्‍याली निकालेपछि मेला पक्षधर युवाहरु प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । केहीबेर निक्कै घम्साघम्सी चल्यो । मेलामा खुकुरी हानाहानसमेत भएको छ । नजिकै रहेको प्रहरी पुगिहाल्यो । झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले समेत निक्कै बल प्रयोग गर्यो । लाठीचार्ज र अश्रुग्याससमेत हानेपछि झडप केहीछिन मत्थर बन्यो । घटनामा मेला पक्षधर युवाको आक्रमणबाट समक्ष श्रेष्ठ र बालजित तामाङ घाइते…